Shikhar Samachar | सफल र खुसी जीवनका लागि ओशोका केही भनाई सफल र खुसी जीवनका लागि ओशोका केही भनाई
सफल र खुसी जीवनका लागि ओशोका केही भनाई
१. ‘अहंकारले तत्कालका लागि खुसी त मिल्ला तर अन्तमा दुःख नै दुःख हात पर्छ । जहाँ सुरुमै सुख हुन्छ त्यसको सधैँ दुःखद अत्य हुन्छ । सुख त्यति सस्तो छैन कि जुन सुरुमै मिलोस् ।’
२.‘तपाईंको सपना पूरा गर्नका लागि यहाँ कोही पनि छैन । किनभने, हरेक मानिस आफ्नो वर्तमान र भाग्य बनाउन लागिरहेका हुन्छन् ।’
३. जीवन आराम र गतिबीचको सन्तुलन हो ।’
४.‘शान्तिको सुरुवात एक मुस्कानबाट हुन्छ ।’ ‘म अहिले मुस्कुराउँछु, हिजो मुस्कुराएकै थिएँ र भोलि पनि मुस्कुराइरहन्छु । किनभने, रोयो भने जिन्दगी छोटो हुन्छ या भनौँ जिन्दगी रुनका लागि हुँदैहोइन ।’
५.‘जहाँ डर हुन्छ त्यो बाटोमा नजानुस् । यस्तो बाटोमा हिँड्नुस् कि जसले तपाईंलाई प्रेम र खुसीले चलाओस् ।’
६.कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक छैन । तपाईं आफूमा जे हुनुहुन्छ, एकदम सही हुनुहुन्छ । पहिला आफूलाई स्विकार्नुस् ।’
७.‘जतिवेला मैले सम्पूर्ण ज्ञान पाएको छु भन्ने लाग्छ त्यतिवेलै तपाईंको मृत्यु हुन्छ । किनकि, त्यसपश्चात् न कुनै आश्चर्य, न त आनन्द नै । त्यसपछि तपाईं मृत जीवन जिइरहेको हुनुुहुन्छ ।’
८. तपाईं त्यो बन्नुस्, जुन तपाईं सोच्नुहुन्छ कि यही नै म हुँ । यसको मतलब हो,आत्मनिर्णयलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुस् ।
९.‘बढीभन्दा बढी कम ज्ञानी हुनुस्, बच्चाजस्तो बन्नोस् र जीवनको मज्जा लिनुहोस् । किनकि, वास्तविकतामा यही नै जीवन हो ।’
१०.गम्भीरता एक बिरामी हो, आत्माको सबैभन्दा ठूलो बिरामी । ञ्चलता मानिसका लागि सबैभन्दा बढी स्वस्थकर हुन्छ ।
११. हरेक चिज पहिला आफैँभित्र खोज्नुस् । नत्र तपाईं अर्को मानिससँग निर्भर रहनुपर्छ, जसले स्वयं आफैँलाई जान्दैन ।’
१२. , ‘बितेको समयका कारण बोझिलो भएर नबस्नुस् । जुन पाठ तपाईंले पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई बन्द गर्नुस् । पटक–पटक एउटै कुरामा जान जरुरत छैन । सोच्नका लागि अनगिन्ती विचार छन् ।’
१३.‘यदि तपाईं कुनै काम विनाप्रेम गर्नुहुन्छ भने गुलाम बन्नुहुन्छ । यदि त्यही कामलाई प्रेमका साथ गर्नुभयो भने राजा हुनुहुन्छ । तपाईंको काम नै तपाईंको खुसी हो ।’
१४. ‘कहिल्यै नसोच्नुस् कि मेरो सच्चा साथी को हो । आफैँलाई सोध्नुस्, के म कसैको सच्चा साथी हुँ ? मुख्य प्रश्न यही हो ।’
ओशोको विचारलाई जीवनमा ल्याउने प्रयास गर्नुहोस्
ओशो एक अन्तर्मुखी होइन। एक भारतीय सन्तले आफ्नो समयमा मानिसहरुलाई यति ठूलो प्रभाव पारे कि पश्चिमी संसारका धेरै राजनीतिक शक्तिहरू उनीहरुको बिरूद्ध लागे। कसैको लागि ओशो एक महान वक्ता, संत र आध्यात्मिक गुरु थिए, तर धेरैले ओशोलाई केवल विलक्षण र यौन गुरुको रूपमा हेर्थे। यी सबैको बाबजुद, ओशोसँग अझै पनि विश्वभरि सयौं फ्यानहरू र अनुयायीहरू छन्।
रजनीश, आचार्य रजनीश वा ओशो, तपाईं कुनै पनि नामबाट कल गर्न सक्नुहुन्छ। ओशोको धारणा समय भन्दा अगाडि थियो र यस कारणले गर्दा उसले त्यस अवधिमा धेरै विरोधको सामना गर्यो। उसले समर्थन गरेको खुलापनले मानिसलाई सन्तुष्टिमा पुर्‍यायो, तर जनताको नजरमा भने यो अभिलाषा बढाउने माध्यम मात्र भएको देखिन्थ्यो।
ओशोले संसारलाई धर्म, समाज र दर्शन दर्शन र बुझ्ने नयाँ तरिका दिए। उनले महाराष्ट्रको पूनामा आश्रम बनाए जुन त्यस समयमा धेरै प्रख्यात भयो।
लाखौं पर्यटकहरु यहाँ आउन थाले प्रत्येक बर्ष र त्यसपछि उनी अमेरिका फर्किए। अमेरिकामा उनले “रजनीशपुरम” स्थापना गरे। भनिन्छ कि अमेरिकी सरकार त्यसबेला रजनीश ओशोसँग यति विचलित थियो कि उनले मार्ने षडयन्त्रसमेत गर्न थाले।
ओशोले भने कि खानेकुरा खाइसकेपछि भोका पनि हराउँछ, त्यस्तै गरी, जब इच्छा पूरा हुन्छ, एक व्यक्ति शान्त हुन्छ र सन्तुष्ट दिमागले कुनै पनि काम सजीलो गर्न सक्दछ। धेरै व्यक्ति यसलाई यौन संभोग देखि आध्यात्मिक अभ्यास गर्न को लागी आफ्नो सृष्टिको सार मान्दछन्।
उनको समाजवाद, राजनीति, संस्थागत धर्म प्रणाली आदि सम्बन्धी प्रवचनहरु आज पर्याप्त विवेकी छन्। ओशोले पनि आफ्नो जीवनमा धेरै कुरा भने जुन हामी अनुसरण गरेर हाम्रो जीवनलाई आदर्श बनाउन सक्छौं। सेक्स, खुलापन, नग्नता आदि उनका थोरै सिद्धान्तहरू थिए। यस्तो कथनलाई हेरौं जुन पढेर तपाई ओशोको बारेमा सेक्स गुरुको धारणा भंग गर्न सक्नुहुन्छ।